ဘုရားသခင်၏တန်ခိုးတော်ကြီးလှပေ၏ ဘယ်လိုအဆုံးမဲ့ဖြစ်လျက်ရှိနေတာဟာဘာမှမလုပ်နိုင်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ အာရုန်သည်ယောသပ်သည် Hackett | ဒန |0င်5/ 04 /20 | Lost Sheep for Christ
ကမ္ဘာ ဦး ကျမ်းအကြောင်းကိုကျွန်ုပ်တို့အများစုသိကြသည်။ ဘုရားသခင်ကအရာရာတိုင်းကိုခြောက်ရက်ပတ်လုံးဖန်ဆင်းပြီးခုနစ်ရက်မြောက်သောနေ့၌သူအနားယူခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်ဆိုတာဘယ်သူလဲဆိုတာကိုမင်းစဉ်းစားဖူးသလား။ သူ၌စွမ်းအားမည်မျှရှိပြီးစကြဝuniverseာကိုမည်သို့ဖန်တီးနိုင်မည်နည်း။ ဘုရားသခင်သည်မိမိကိုယ်ကိုသာလျှင်ထူးခြားသောအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ စကြဝofာကိုဖန်ဆင်းရာတွင်အခြားပြင်ပအင်အားစုများကသူ့ကိုမကူညီခဲ့ကြပါ။ ထို့ကြောင့်ဘုရားသခင်သည်စကြဝuniverseာကိုတစ် ဦး တည်းသောဖန်ဆင်းရှင်ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာ ဦး အခန်းကြီး ၁ ကိုဖြိုခွဲကြစို့။
ကမ္ဘာ ဦး ၁း၁-၅ “ အစအ ဦး ၌ဘုရားသခင်သည်ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ မြေကြီးသည်အဆင်းသဏ္andာန်မရှိ၊ လွတ်လပ်လဟာဖြစ်၏။ ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်သည်ရေမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာလှုပ်ရှားတော်မူ၏။ ဘုရားသခင်ကလည်းလင်းဖြစ်စေဟုအမိန့်တော် ရှိ၍ အလင်းဖြစ်လေ၏။ ထိုအလင်းသည်လင်းလေ၏။ ထိုအလင်းကောင်းသည်ကိုဘုရားသခင်မြင်။ ၊ အလင်းနှင့်မှောင်မိုက်ကိုပိုင်ခြားခွဲထားတော်မူ၏။ အလင်းကိုနေ့ဟူသောအမည်ဖြင့်၎င်း၊ မှောင်မိုက်ကိုညဉ့်ဟူသောအမည်ဖြင့်၎င်း၊ ညဦးနှငျ့နံနကျတစျခုရှိခဲ့ နေ့ ‘ ။
ဖန်ဆင်းခံသတ္တ ၀ ါတစ် ဦး ၏တည်ရှိမှုသည်“ သဘာဝအလျောက်ထည့်သွင်းထားသည်” ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏လူ့ဉာဏ်အတွင်းနက်ရှိုင်းစွာကျွန်ုပ်တို့တစ်စုံတစ်ခုထွက်ပေါ်နေကြောင်းကျွန်ုပ်တို့သိထားကြသည်။ ဘုရားသခင်သည်မည်မျှကြီးထွားမှုတိုင်းတာသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့မသိပါ၊ မည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်ကမျှဘုရားသခင့်မျက်နှာတော်ကိုမဖော်ပြခဲ့ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကောင်းကင်ကိုတက်ပြီး Beatific Vision ၌ပျော်မွေ့သည်နှင့်တပြိုင်နက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘုရားသခင်ကိုမြင်ရလိမ့်မည်။ အခုတော့တစ်ယောက်ယောက်ကသင့်ကို“ ငါဘုရားသခင်ကိုမမြင်ရရင်သူမရှိဘူး” လို့ပြောလိမ့်မယ်။ ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင် DNA ကိုမျက်စိမမြင်ဘဲကြည့်နိုင်ခြင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်တီထွင်ဖန်တီးထားသောအရာဝတ္ထုအတွက်သတ်မှတ်ထားသောဒီအဲန်အေအမျိုးအစားရှိသည်ဟူသောအချက်ကိုမဖယ်ရှားနိုင်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘုရားသခင်ကိုအဆုံးမရှိအဓိပ္ပာယ်ဖြင့်နားလည်လာသည်။ စိန့်သောမတ်စ်အကွီနာ့စ်ကသူသည် Summa Theologica တွင် “ တမန်တော်က“ သူမြင်ရသောအရာများကိုရှင်းလင်းစွာမြင်တွေ့ရပြီး၎င်းကိုပြုလုပ်ထားသောအရာများအားဖြင့်နားလည်ထားသည်” ဟုဆိုသည် (ရောမ ၁း၂၀) ။ သို့သော်ဖန်ဆင်းခြင်းများအားဖြင့်ဘုရားသခင်တည်ရှိခြင်းကိုပြသခြင်းမရှိပါက၎င်းသည်မဖြစ်နိုင်ပါ။ ပထမဆုံးအချက်ကတော့ငါတို့တည်ရှိမတည်ဆိုတာသိဖို့လိုတယ်။
ငါသရုပ်ပြသည်။ သရုပ်ပြခြင်းကိုနည်းလမ်းနှစ်မျိုးဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ တစ်ခုမှာအကြောင်းအရင်းအားဖြင့်ဖြစ်သည်၊ ၎င်းကို“ အရီအိုရီရီ” ဟုခေါ်ပြီး၎င်းသည်လုံးဝကြိုတင်ကြံစည်ထားခြင်းမှငြင်းခုန်ရန်ဖြစ်သည်။ အခြားတစ်ခုမှာ အကျိုးသက်ရောက်မှု မှတဆင့် ဖြစ်ပြီးသရုပ်ပြခြင်းကို“aposteriori” ဟုခေါ်သည်။ ဤသည်ကိုငါတို့သာအတော်လေးသာကြိုတင်ဘာကနေငြင်းခုန်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ အကျိုးသက်ရောက်မှုတစ်ခုသည်၎င်း၏အကြောင်းတရားထက်ကျွန်ုပ်တို့အားပိုမိုသိရှိလာပါက၊ အကျိုးသက်ရောက်မှုမှသည်အကြောင်းရင်းကိုသိကျွမ်းခြင်းသို့ရောက်သည်။ ထို့အပြင်သက်ရောက်မှုတိုင်းမှ၎င်း၏အကြောင်းရင်းများတည်ရှိမှုကိုဖော်ပြနိုင်သည်။ ၎င်းသည်၎င်း၏သက်ရောက်မှုများကိုကျွန်ုပ်တို့အားပိုမိုသိရှိစေသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အကျိုးသက်ရောက်မှုတိုင်းသည်၎င်း၏အကြောင်းရင်းပေါ်တွင်မူတည်သည်။ အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါကအကြောင်းရင်းကိုကြိုတင်တည်ရှိရမည်။ ထို့ကြောင့်ဘုရားသခင်တည်ရှိခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင်မထင်ရှားသော ကြောင့်သူ၏သက်ရောက်မှုများမှကျွန်ုပ်တို့သိကြသောအရာများမှပြသ နိုင်သည် ။ ကျွန်ုပ်အတွက် ဘုရားသခင်သည်အလွန်စင်ကြယ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းပြချက်သည်သူအားပုံဖော်။ မရပါ။ သို့သော်သူ၏စီရင်စုတည်ရှိမှုသည်ကျွန်ုပ်တို့ပတ် ၀ န်းကျင်တွင်ရှိသည်။ သူလည်း စင်ကြယ်သောအနှစ်သာရဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့အနှစ်သာရကိုပစ္စည်းဥစ္စာအဖြစ်သတ်မှတ်။ ဆိုလိုသည်မှာဘုရားသခင်သည်ထူးခြား။ တစ်မျိုးတည်းဖြစ်သောသူသည်ပုံတူကူး။ မရပါ။ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ခန္ဓာ၊ စိတ်ဝိညာဉ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ခြင်းတူသည်မဟုတ်ပါ၊ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်နှစ် ဦး စလုံးသည်အလွန်ကွဲပြားသောပုံစံများဖြစ်သော်လည်းသူတို့သည်ကျွန်ုပ်ကိုလုပ်ရန်တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး ပူးပေါင်း၍ အလုပ်လုပ်ကြပါသည်။ ကျွန်ုပ်၏ဝိညာဉ်သည်ကျွန်ုပ်၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခန္ဓာနှင့်စည်းလုံးညီညွတ်စွာအလုပ်လုပ်သည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏လုပ်ဆောင်မှုကိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောအရစွမ်းအားပေးသောကြောင့်၊ ကျွန်ုပ်၏ဝိညာဉ်မပါဘဲ၊ ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ခန္ဓာ၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရလှုပ်ရှားမှုမရှိပါ။ ၎င်းသည်အော်ဂဲနစ်တစ်သျှူးအလွတ်တစ်ခုသာဖြစ်လိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်၏ ၀ ိညာဉ်သည်ကျွန်ုပ်နေ့စဉ်လှုပ်ရှားလုပ်ဆောင်ခြင်း၊ စားခြင်းနှင့်လည်ပတ်ခြင်းအတွက်စွမ်းရည်ကိုပေးသည်။ ဘုရားသခင်သည်အလုပ်လုပ်ရန်ခန္ဓာကိုယ်မလိုပါ၊ သို့သော်သူ၏စကားများဖြင့်ကမ္ဘာကြီးသည်တည်ရှိနိုင်သည်။ လူတစ် ဦး သည်ဘုရားသခင်၏စိတ်တော်မည်မျှကျယ်ပြန့်သည်ကိုသာမြင်ယောင်ကြည့်နိုင်သည်။ ဥပမာနေကိုစဉ်းစားပါ။ Mr. Ron Kurtus ၏သုတေသနပြုချက်အရနေသည် “ ဟိုက်ဒရိုဂျင် ၇၀%၊ ၂၈% ဟီလီယမ်နှင့်သံကဲ့သို့သောသတ္တု ၂% တို့ပါဝင်သည်” ကို ကျွန်ုပ်တို့သိရှိရသည် ။ အခြားလက္ခဏာများမှာ၎င်း၏လည်ပတ်ခြင်း၊ အပူချိန်နှင့်ဓါတ်ရောင်ခြည်တို့ဖြစ်သည်။ ”  ထို့အပြင်နေသည် ၁၅၆၀၀၀၀၀ c ဖြစ်ကြောင်း၎င်း၏အလယ်ဗဟိုတွင်ရှိသည်။ အိုကေ အကယ်၍ သိပ္ပံပညာသည်နေ၏လုပ်ဆောင်ချက်ကိုရှင်းပြရန်သင်္ချာပုံသေနည်းကိုသက်သေပြနိုင်လျှင်ဘုရားသခင်မရှိပါ။ ငါကသင်္ချာတွက်ချက်နိုင်လျှင်နေ၏အချင်းသည်မည်မျှဖြစ်သည်၊ သို့မဟုတ်နေ၏အချင်းသည်ကမ္ဘာမြေနှင့်မည်မျှနှိုင်းယှဉ်လျှင်ပင်နေ၏ပုံသဏ္ဌာန်ကိုအဘယ်ကြောင့်ဖန်တီး ခဲ့ကြောင်း စိတ်ကူးမှပယ်ရှားခြင်းမဟုတ်ဟုငါအခိုင်အမာပြောဆိုသည်။ ၎င်းသည်အပင်သို့မဟုတ်ကြီးထွားရန်၊ လူသားတို့အားနွေးထွေးစေရန်အဘယ်ကြောင့်နေရောင်လိုအပ်သည်။ နေဟာ“ ဘယ်ကမှပေါ်ထွက်မလာ” ဘူး။ ငါငြင်းမယ်လို့ နေရောင်ရုံလျှင် တေုနျးရုတျတရကျ အဘယ်ကြောင့်နေပူသို့မဟုတ်ဘယ်လိုငါကငါ့ကိုရန်အရေးကြီးပါသည်သည်ကိုသိမှတ်မှုအတွက်သိလား, ဘယ်နေရာမှာများထဲက, ထို့နောက်အဘယ်ကြောင့်တစ်ဦးငှက်တစ်ပုံသဏ္ဍာန်အဖြစ်ထွက်မလာဘဲ ?
ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့မှီခိုအားထားရသောအရင်းအမြစ်များအားလုံးရှိသည့်ကမ္ဘာမြေ၏စိတ်ဝင်စားမှုသည် “မတော်တဆမှု” လည်းမဟုတ်ပါ။ ရေနှင့်မိုthe်းကောင်းကင်ကိုဖန်ဆင်းတော်မူ။ ၊ သတ္တ ၀ ါတစ်ကောင်သည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခွဲထုတ်ခြင်းနှင့်ကောင်းကင်နှင့်သမုဒ္ဒရာကိုမည်သို့ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သနည်း။ နက္ခတ္တဗေဒပညာရှင်များသည်စကြာ ၀ universeာသည်များသောအားဖြင့်ဟိုက်ဒရိုဂျင်နှင့်ဟီလီယမ် ( helium hydride ion ( HeH +)) ဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ ဤမော်လီကျူးသည်စကြာ ၀ inာရှိစွမ်းအင်၏အရင်းအမြစ်ဖြစ်သည်။ ဒီမော်လီကျူးဘယ်လောက်မြန်မြန်ရွေ့လျားနေတယ်ဆိုတာကိုအခြေခံပြီးရေကမော်လီကျူးကိုအောက်စီဂျင်ကိုဖယ်ထုတ်ခြင်းအားဖြင့်ဖယ်ထုတ်နိုင်မှာလား။ H2O သည်မော်လီကျူး၏အသေးငယ်ဆုံးဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်, သငျသညျနိုင်ပါတယ် ဖြစ်နိုင်သည် မှနှိုင်းယှဉ်ဘယ်လိုမိုးသည်းထန်စွာအရည်စိတ်ကူး ဓါတ်ငွေ့။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အငွေ့ကိုမမြင်နိုင်သောကြောင့်၎င်းသည်သဘာဝအရမည်သို့ပြုလုပ်သည်ကိုအလွယ်တကူရှင်းပြနိုင်မည်လော။ ၎င်းသည်ကောင်းကင်ကိုသမုဒ္ဒရာနှင့်ခွဲခြားသောစွမ်းအင်တစ်ခုတည်းလား။ အတွေးအခေါ်ပညာရှင်ဒေးဗစ်ဟွမ်က “ အတွေးအခေါ်ပညာရှင်အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်ဒphilosophနိကဗေဒဆိုင်ရာပရိသတ်နှင့်သာစကားပြောပါကကျွန်ုပ်သည် မိမိကိုယ်ကိုအသိပညာမဲ့သူအဖြစ်ဖော်ပြ သင့် သည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ထိုတွင်သက်သေပြနိုင်သည့်ခိုင်လုံသောအငြင်းပွားမှုရှိသည်ဟုကျွန်ုပ်မထင်ပါ။ ဘုရားမဟုတ်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ၊ ကျွန်ုပ်သည်လမ်းပေါ်ရှိသာမန်လူအားမှန်ကန်သောထင်မြင်ချက်ကိုပို့ဆောင်လိုပါကကျွန်ုပ်သည်ဘုရားမဲ့ဝါဒီဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သင့်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ကျွန်ုပ်သည်ဘုရားသခင်မရှိကြောင်းသက်သေပြနိုင်ခြင်းမရှိသောအခါကျွန်ုပ်သည်၊ ငါ Homeric ဘုရားများရှိကွောငျးသက်သေပြနိုင်ဘူးကြောင်းညီတူညီမျှထည့်ပါ။ ” ဒီပတ်ပတ်လည်မှထွက်ရှိရုံပဲ float မှတစ်ခုခုအမှုအရာဖြစ်ပျက်အောင်ငါ့ကိုပြောပြပါလိမ့်မယ်, ငါ့စိတ်ကူးစိတ်သန်းသာ figment ဖြစ်ပါတယ်။ သိပ္ပံပညာကယခုဖြစ်ပျက်ပုံကိုရှင်းပြခဲ့ပြီးကောင်းကင်နှင့်သမုဒ္ဒရာကိုဖန်ဆင်းရန်နှင့်သွေ့ခြောက်သောမြေပေါ်လာရန်ဘုရားသခင်မလိုအပ်ကြောင်းသက်သေပြခဲ့သည်။ အားလုံးမြန်မြန်ဆန်ဆန်ဖြစ်ပျက်ခဲ့ပြီးတစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာ ကို သက်ဆိုင်ရာစနစ်တွင်နေရာယူလိုက်သည် ။ အကြောင်းပြချက်အလုံအလောက်မရှိခြင်းကြောင့်စကြာ ၀ ofာ၏သမိုင်းတွင်ဘုရားသခင်သို့မဟုတ်အခြားမည်သူမဆိုဤအဖြစ်အပျက်တွင်ပါ ၀ င်ခဲ့သည်ဟူသောအထောက်အထားမရှိပါ။
ငါ ဒါဝိဒ်သည် Hume ချေပနှင့်ပင်ကြောင်းပြောချင် သည်ဤရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်ရပ်ကလုပ်ခဲ့တဲ့လမ်းဖြစ်ပွားခဲ့သည်, နှင့် ထိုသို့မဆိုလို, ငါတို့မမြင်ရပါဘူး ဘုရားသခငျသညျစေရန်မျှမ ဖြစ်ပျက် ed ။ ကိုယ့်ကို “ကြီးမားသော-ပေါက်ကွဲသံကြီးသီအိုရီန်းကျင်နဲ့ပေါက် ” တစ်ဦး တစ်ဦး s နေရာအရပ်ယူရန်ဤရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်ရပ်ဘို့အကြောင်းပြချက်လည်းမဟုတ်ပါဘူး အလုံအလောက် ။ အဘယ်အရာကယင်းကိုပင်အစပြုခဲ့သနည်း။ တစ်ခုခုပဲရွေ့လျားသို့ဤထားခဲ့ရသည်။ ကိုယ့်ကိုယ်ပိုင်အတွက်ခွဲခြားရန်ရေနှစ်ခုအလောင်းတွေအဘို့, အပေါ်မခံမရပ်ပါဘူး င်း၏ ကိုယ်ပိုင်နှစ်ပေ။ စိန့်သောမတ်စ်အကွီနပ်စ်သည်အမြဲတမ်း တက်ကြွသော ပြင်ပအကြောင်းတရားတစ်ခု၏ဤမေးခွန်းနှင့် ပတ်သက်၍ သူ၏အဖြေကိုမျှဝေသည် ။ ” ပထမနှင့်ပိုပြီးထင်ရှားတဲ့နည်းလမ်းကတော့ရွေ့လျားမှုရဲ့အငြင်းပွားမှုပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏အာရုံ၌ကမ္ဘာပေါ်ရှိအချို့သောအရာများရွေ့လျားနေကြောင်းသေချာသည်။ အခုလှုပ်ရှားနေတဲ့အရာအားလုံးကိုအခြားတစ်ခုကရွေ့လျားစေတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ရွေ့လျားမှုဆီသို့ ဦး တည်ရာကိုစွမ်းဆောင်နိုင်ခြင်း မှလွဲ၍ ဘာမှမရွေ့လျားနိုင်ဘူး; အရာတစုံတခုကြောင့်လုပ်ရပ်အတွက်ဖြစ်သကဲ့သို့လှုံ့ဆျောသော်လည်း။ ရွေ့လျားမှုသည်ဖြစ်နိုင်ခြေမှအမှန်တကယ်အထိတစ်ခုခုကိုလျှော့ချခြင်းထက်အခြားဘာမျှမရှိပါ။ သို့သော်အမှန်တကယ်အခြေအနေရှိသည့်အရာတစ်ခု မှလွဲ၍ မည်သည့်အရာကိုမှဖြစ်နိုင်ခြေမှအမှန်တကယ်သို့လျှော့ချ။ မရပါ။ ထို့ကြောင့် အမှန်တကယ်တွင်ပူပြင်းသည့်အရာသည်မီးကဲ့သို့ပင်သစ်သားကိုဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောအပူဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ပြီး၎င်းအားရွေ့လျားခြင်းနှင့်ပြောင်းလဲခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်သည်။ ယခုတူညီသောအရာသည်တူညီသောအပြုအမူနှင့်တပြိုင်နက်တူညီသောအပြုအမူနှင့်တူညီမှုတစ်ခုတည်းရှိရန်မဖြစ်နိုင်သောကြောင့်ကွဲပြားခြားနားသောအရာများတွင်သာဖြစ်သင့်သည်။ အမှန်တကယ်ပူနေသော အရာအတွက် တစ်ပြိုင်နက်တည်း ပူ သည်မဖြစ်နိုင်ပါ၊ ဒါပေမယ့်တပြိုင်နက်အလားအလာအအေးဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်တူညီသောအပြုအမူနှင့်တူညီသောနည်းဖြင့်အရာတစ်ခုသည်ရွေ့လျားမှုနှင့်ရွေ့လျားမှုဖြစ်သင့်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းသည်သူ့ဟာသူရွှေ့ပြောင်းသင့်သည်။ ထို့ကြောင့်ရွေ့လျားနေသောအရာအားလုံးကိုအခြားသူမှရွေ့လျားရမည်။ အကယ်၍ ၎င်းကိုရွေ့လျားစေသည့်အရာအားလုံးကိုသူ့ဟာသူရွေ့လျားစေပါက၎င်းကိုအခြားသူတစ် ဦး နှင့်၎င်းသည်အခြားသူတစ် ဦး ကနောက်တဖန်လှုပ်ရှားရန်လိုအပ်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်အဆုံးမဲ့ဆက်သို့မသွားနိုင်တော့ပါ၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ပထမ ဦး ဆုံးအဘယ်သူမျှမမောင်းနိုင်၊ နောက်တစ်ဆင့်တက်သူများကရွေ့လျားနေသရွေ့၎င်းကိုပထမ ဦး ဆုံးမောင်းသူကရွေ့လျားနေသည်ကိုမြင်လျှင်၊ ဒါကြောင့်လက်ဖြင့်ရွေ့လျားထားသောကြောင့်သာန်ထမ်းလှုံ့ဆော်ပေးအဖြစ်။ ထို့ကြောင့်, အခြားအဘယ်သူမျှမအားဖြင့်ရွေ့လျားမှုတင်ပထမ ဦး ဆုံးတစ်ပန်းကိုရောက်ရှိရန်လိုအပ်ပေသည် ဤအရာ၌လူအပေါင်းတို့သည်ဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူသည်ကိုသိမှတ်ကြလော့ဟု၊ 
စကြဝuniverseာကိုအခြားမည်သည့်အင်အားစုများကဖန်တီးသနည်း ဘုရားသခင်နှင့်အတူတွဲဖက်အလုပ်လုပ်သောအမွှေးအကြိုင်ကဲ့သို့သော အခြား အမြင့်မြတ်ဆုံး ဖြစ်ရပ်တစ်ခုရှိခဲ့သ လောသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့သိသည့်အတိုင်းစကြာ ၀ universeာကိုဖန်တီးခဲ့သောသဘာဝနှင့်သဘာဝလွန်ဖြစ်ရပ်များပေါင်းစပ်မှုရှိနိုင်ပါသလော။ ပို၍ တိကျစွာပြောရလျှင် Big Bang သည်ကြည့်ရှုနိုင်သောစကြာ ၀ itselfာကိုယ်နှိုက်၏မွေးဖွားခြင်းကိုလည်းရည်ညွှန်းနိုင်သည်။ တစ်ခုခုပြောင်းလဲသွားသည်နှင့်ယနေ့ဖြစ်ပေါ်စေသည့်အဖြစ်အပျက်များကိုစတင်ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ မျက်မှောက်ခေတ်ဘယ်လ်ဂျီယံရူပဗေဒပညာရှင် ဂျော့ခ်ျ Lemaître သည်စကြာ ၀ universeာမည်သို့ကျယ်ပြန့်သည်ကိုရှင်းပြရန် Edwin Hubble မှအချက်အလက်များကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။  တွင်းနက်မှနဂါးငွေ့တန်းအထိကျွန်ုပ်တို့၏စကြဝuniverseာသည်တစ်ခုအပါအ ၀ င်ဖြစ်သည်။ သိပ္ပံပညာရှင်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏နဂါးငွေ့တန်း၏နက်ရှိုင်းမှုကိုအခြားနဂါးငွေ့တန်းများသို့ရှာဖွေဆဲဖြစ်သည်။ ၎င်းအီလက်ထရွန်များ၊ ပရိုတွန်များနှင့်အက်တမ်များဖွဲ့စည်းသောဤပူပြင်းသည့်ဓာတ်ငွေ့များသည်ကမ္ဘာမြေကြီး၊ ဂြိုဟ်၊ လေ၊ ရေစသည်တို့ကိုစတင်ဖြစ်ပေါ်လာသည်။ ၎င်းသည်ဆင့်ကဲသီအိုရီကိုအထောက်အကူပြုသည်။ ဤရွေ့ကားအက်တမ် created အကောင်းဆုံးကိုအိမ်ရှင်မျိုးစိတ် (လူ့, အပင်များ, ကြယ်များ, အာကာသ) နှင့်အရာခပ်သိမ်းရုံအရပ်သို့ဖွဲ့စည်းရန်စတင်ခဲ့သည်။ အကယ်၍ သင်သည်တစ်စုံတစ်ခုကိုယုံကြည်ခဲ့ပါက ဤအဖြစ်အပျက်ကို ဘုရားသခင်ကအကူအညီလိုအပ်သည်၊ သို့မဟုတ် ထိုမသိရသောအဖြစ်အပျက် သည်ဘုရားသခင်ဖြစ်လိမ့်မည် ဟူသောသက်သေသာဓက ဖြစ်သည်။ ကတည်းက ဒီဖြစ်ရပ်အဆုံးမရှိတဲ့အခြား “ဖြစ်လျက်ရှိ” စဉ်းစားပါလိမ့်မယ်, ဘုရားသခင်သည်မိမိဖန်တီးမှုအင်အားကြီးအတွက်ကန့်သတ်ထားကြောင်းစေပါသလား ဘုရားသခင်တည်ရှိမှု၏ဒုတိယသက်သေကို Summa Theologiae (Prima Pars Q.3) မှရယူနိုင်ပါသည်။ “ ဒုတိယနည်းလမ်းမှာအကျိုးရှိသည့်အကြောင်းရင်း၏သဘောသဘာဝမှဖြစ်သည်။ အဓိပ္ပာယ် ရှိသောလောက၌ အကျိုးရှိသည့်အကြောင်းရင်းများရှိသည်။ အရာဝတ္ထုတစ်ခုသည်သူ့ဟာသူ၏အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေသောအကြောင်းအရင်းဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရှိရသောအမှုမရှိ (ဖြစ်နိုင်သည်လည်းမဟုတ်)၊ ဒါကြောင့်မဖြစ်နိုင်ဘူးသောကိုယ်ကိုကြိုတင်ဖြစ်လိမ့်မယ်။ ယခုထိရောက်သောအကြောင်းရင်းများတွင်အဆုံးမရှိဆက်မသွားနိုင်တော့ပါ၊ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်အကျိုးရှိစွာဖြစ်ပေါ်စေသောအကြောင်းတရားအားလုံးတွင်စနစ်တကျလိုက်နာခြင်းအားဖြင့်၊ ပထမသည်အလယ်အလတ်အကြောင်းရင်း၏အကြောင်းရင်းဖြစ်ပြီးအလယ်အလတ်သည်အဓိကအကြောင်းအရင်း၏အကြောင်းအရင်းဖြစ်သည်၊ တစ် ဦး တည်းသာ။ အခုတော့အကြောင်းမရှိဖယ်ရှားပစ်ရန်ဖြစ်ပါသည်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုပယ်ရှားဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်၊ ထိရောက်သောအကြောင်းအချက်များကြားတွင်ပထမဆုံးအကြောင်းမရှိပါကအဆုံးစွန်သောမည်သည့်အကြောင်းပြချက်မျှရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ သို့သော်ထိရောက်သောအကြောင်းရင်းများရှိလျှင်အကန့်အသတ်မရှိဆက်ရှိနေမည်ဆိုလျှင်ပထမ ဦး ဆုံးထိရောက်သောအကြောင်းတရားမရှိတော့ပါ၊ အဆုံးစွန်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုလည်းမရှိ၊ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမှားယွင်းသောသည်အရာအားလုံးသည်။ ထို့ကြောင့် လူတိုင်းသည်ဘုရားသခင့်နာမတော်ကိုပေးသောပထမဆုံးထိရောက်သောအကြောင်းရင်းကိုဝန်ခံရန်လိုသည်။
ဒါကသီအိုရီအ ပုံရသည် မှ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ဧမာနွေလကန့်, ဂျာမန် Philosopher ထောက်ခံဖြစ် “ကျနော်တို့လက်တွေ့ဘဝကိုယ်တိုင်ကသိတော့မှဖြစ်နိုင်သည်” ။ အချိန်နှင့်အာကာသဖန်တီးမှုအစတွင်လူသားများမရှိခြင်းကြောင့်ဒေါက်တာ Lemaître ၏ဤစိတ္တဇသီအိုရီသည်ယနေ့ ကျွန်ုပ်တို့ နေ့စဉ်အသက်တာတွင်ဤအရာများသည် ကျွန်ုပ်တို့ အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်သောကြောင့်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသည်။ ကျနော်တို့နေရောင်လိုအပ် ပတ်ဝန်းကျင်ကနေကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ရတဲ့, ပြီးတော့သူ့ရဲ့စွမ်းအင် (ရရန်နေရောင်ခြည်ကို အသုံးပြု. , အစားအစာကြီးထွားအကူအညီစက်ရုံနွေးစောင့်ရှောက်ဖို့ အလင်း )  ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်နေစွမ်းအင်ကိုအသုံးချရန်နည်းပညာများတီထွင်ခဲ့ပြီးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားကိုထုတ်လုပ်နိုင်ကြသည်။ ဥပမာဆိုလာပြားများ။ ဤခံစားမှုအတွေ့အကြုံများကိုကျွန်ုပ်တို့ခံစားနေရပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်မှုစွမ်းရည်များထဲသို့ ၀ င်ရောက်လာသည့်သတင်းအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့၏ထောက်လှမ်းရေးကဤနည်းအတိုင်းလုပ်ဆောင်သည်။ ကျွန်ုပ်သိသောစကြဝuniverseာကိုဖန်ဆင်းရန်ဘုရားသခင်နှင့် အခြား အင်အား တစ်ခုလုပ်ဆောင်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ် အတွက်ခိုင်မာသည့်အခြေခံအုတ်မြစ်မဟုတ်ပါ ။ မြည်းကိုငါ ert t ကို အမိန့်ထို့နောက်သူကကျမ်းစာထဲမှာဘုရားသခငျ၏အားနည်းချက်ကိုပြသမယ်လို့စစ်မှန်တဲ့ဖြစ်ဒီ “သီအိုရီ” ကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်အတွက်ဦးထုပ်။ ဆိုလိုသည်မှာသူသည်မဟုတ်၊ အနန္တတန်ခိုးရှင်လည်းမဟုတ်၊ အလုံးစုံသိသောလူမဟုတ်၊ ၎င်းသည်“ ခိုင်လုံသော၊ သိပ္ပံနည်းကျအချက်အလက်များ” အပေါ်အခြေခံထားခြင်းမရှိသောကြောင့်အမှန်တရားကိုရှာဖွေခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်မှုအပေါ်ကျွန်ုပ်တို့၏အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်အပေါ်အခြေခံရမည်ဖြစ်သောကြောင့်၊ ဘုရားသခင်၏တည်ရှိမှု၏သဘောသဘာဝသည်သူလှုပ်ရှားခဲ့ပြီးဖြစ်သောအင်အားများကိုလုပ်ဆောင်ရန်ဖြစ်သည်။ ရွေ့လျားမှုသည်ဘာမှမဖြစ်သည့်အတွက်အရာအားလုံးကိုရွေ့လျားစေရန်၎င်းကိုတွန်းထုတ်ရမည်။ နယူတန်၏ပထမနိယာမကပြင်ပအင်အားတစ်ခု၏လုပ်ဆောင်မှုအားဖြင့်၎င်း၏အခြေအနေကိုပြောင်းလဲရန်မဖြစ်မနေမဟုတ်လျှင်အရာဝတ္ထုတိုင်းသည်တူညီသောရွေ့လျားနေသောအရာဝတ္ထုတိုင်းကိုငြိမ်ဝပ်စွာနေရမည်သို့မဟုတ်တပြိုင်တည်းရွေ့လျားနေလိမ့်မည်ဟုဖော်ပြထားသည်။ ရေကိုပြောင်းရွှေ့စေရန်အဘယ်သူမျှမလေတိုက်ရှိခဲ့လျှင်, သမုဒ္ဒရာပေါ်ရေစီးကြောင်းထုတ်လုပ်နိုင်သည် ၎င်း၏ ကိုယ်ပိုင်? ဘာမျှမကအပေါ်သရုပ်ဆောင်လျှင်ရွေ့လျားမှုမဖြစ်နိုင်ပါ။ လုံလောက်သောအကြောင်းပြချက်၏နိယာမ, Fr. လိုက်နာ Clarke SJ ၏“ The One and The The Great ” pg စာမျက်နှာတွင်ဖော်ပြထားသည်။ 20 “တည်ရှိရန်စတင်ဖြစ်လျက်ရှိသမျှအကြောင်းပြချက်လိုအပ်ပါတယ်” ကြောင်း ဖော်ပြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏တည်ရှိမှုသည်ဘုရားသခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့အားသူ၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၌ပါ ၀ င်ရန်နှင့်သူ၏ဖန်ဆင်းခြင်းအစီအစဉ်၌ပျော်မွေ့ရန်ကျွန်ုပ်တို့ကိုဖန်ဆင်းခဲ့သောအကြောင်းရင်းအပေါ်အခြေခံသည်။ စင်ကြယ်သောသတ္တဝါဖြစ်ခြင်း,
 Summa Theologiae: ဘုရားသခင်တည်ရှိခြင်း (Prima Pars, မေးခွန်း ၂)
 Summa Theologiae: ဘုရားသခင်တည်ရှိခြင်း (Prima Pars, Q.3)
← ਰੱਬ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਇੱਕ ਅਨੰਤ ਜੀਵ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਐਰੋਨ ਜੋਸਫ ਹੈਕੇਟ | ਫਿਲਾਸਫੀ |05 / 04 /20
परमेश्वरको शक्ति को विशालता कसरी असीमित प्राणीले केहि बनाउनबाट केही गर्न सक्दछ? हारून यूसुफ Hackett | दर्शन |05 / 04 /20 →